राजनीतिबाट अवकाश लिन खोजेको थिएँ, परिस्थितिले दिएन : प्रधानमन्‍त्री ओली – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६५ वर्षकै उमेरमा आफूले राजनीतिबाट सन्न्यास लिन खोजे पनि परिस्थितिले नदिएको बताएका छन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको एपीवान एचडी टेलिभिजनमा बुधबारबाट सुरु भएको कार्यक्रम ‘द बाभ्रो डेल्टा सो’ का लागि पत्रकार भूषण दाहालसँग अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओली यस्तो बताएका हुन्।
‘मलाई आफूले बोलेका शब्दबाट पछाडि हट्न आउँदैन। मेरो कठिनाइ त्यो छ। तर, मेरा इच्छाहरू कहिलेकाहीँ परिस्थितिले फरक पार्छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश लिन खोजेको थिएँ। तर परिस्थितिले दिएन। मेरा साथीहरूले त्यो इजाजत मलाई दिएनन्। मेरो इच्छा थियो। मैले साथीहरूलाई भनेको हुँ। तर मेरो इच्छालाई साथीहरूले मानेनन्। म अध्यक्ष भइसकेको थिएँ। त्यो अवस्थाबाट छोडेर हेर्दा राम्रो देखिएन।’
नेकपाभित्र जस्ता खालका विवाद देखिए पनि पार्टी विभाजन नहुने बताएका छन्। पार्टीभित्रको विवाद ठूलो समस्या नभएको र आफूले एकता बचाउन चुप बसेर कोसिस गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ओलीले अबको ५ दिनभित्रै पार्टीभित्र नयाँ सिनारियो देखिने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री भएर पनि गुट चलाउने भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, ‘म माओवादीलाई समेत एउटै धारमा ल्याउने मान्छेले गुट चलाएको देख्नुभयो ? गएको चुनावमा एउटा गुट चलाएको देख्नुभयो कि मेचीकाली अभियान चलाएको देख्नुभयो ? मेचीकाली जनसागर उर्लेको देख्नु भएन ? देश ड्राइभ गर्न हिँडेको मान्छे सानो गुट चलाएको देख्नुभयो ? म संसदीय दलको नेता पनि निर्वाचन जितेर आएको हुँ। अध्यक्ष पनि लडेर भएको हुँ। मभन्दा अघि त लड्ने चलन थिएन नि।’
अयोध्या र भगवान् रामका विषयमा आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर आत्तिनुपर्ने र आक्रोशित हुनुपर्ने विषय नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको काममा कुनै भ्रष्टाचार भएको भए जोसकुै भए पनि कारबाही गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए। आफूले सञ्चारमाध्यममा आएका र विभिन्न व्यक्तिहरूले उठाइरहेका प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको र त्यसमा दोषी देखिए कारबाहीको भागीदार बनाइने पनि बताए। यो खबर सन्देश पाटोबाट साभार गरिएको।
Next प्रधानमन्त्री केपि ओलिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिलाई सि मा वि वादको बारेमा यसो भन्नू भयो…हेर्नुहोस।